के तपाईको ‘ब्ल’ड प्रे’सर लो’ छ ? त्यसो हो भने खानुहोस् यी १२ खानेकुरा ! – Gandaki Chhadke
काठमाडौं । अस्तव्यस्त जीवनशैली तथा खानपानमा ध्यान नदिँदा मानिसहरु विभिन्न रो’गबाट ग्र’सित छन् । ब्लड प्रेसर लो पनि स्वास्थ्यको अनगिन्ति स’मस्यामध्ये एक हो । ब्ल’ड प्रे’सर लो बि’रामीहरुले आफ्नो खानेकुरामा विशेष ध्यान दिन अत्यावश्यक छ । खानपानमार्फत नै यसलाई सामान्य बनाउन सकिन्छ । सामन्य र’क्तचाप १२०/८० हुनुपर्छ । तर, यदि तपाईको ब्ल’ड प्रे’सर ९०/६० वा त्यो भन्दा कम छ भने,लो ब्ल’ड प्रे’सर भएर्को मानिन्छ ।सामान्तयाः यदि कसैको लो ब्ल’ड प्रे’सर छ भने त्यस्ता व्यक्तिले इ’न्सुलिन बढाउनका लागि त्यस्ता व्यक्तिहरुले गु’लियो खानेकुराहरु खाने गर्दछन् ।
लो ब्ल’ड प्रे’सरका बि’रामीले कस्तो प्रकारको खानेकुरा खानुपर्छ भन्ने विषयमा केहि जानकारी तल दिइएको छ ।१. पात भएको सा’गसब्जीः पात भएको सा’गसब्जीमा आ’इरन हुने गर्दछ जुन मानव शरिरको लागि अत्यावश्यक खनिज पदार्थ हो । ब्ल’ड प्रे’सरलाई कम गरेर त्यसलाई सामान्य बनाउनका लागि यो निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । सागसब्जीमा प्रोटिन र भिटामिन हुने गर्दछ । ब्ल’डप्रेसरलाई सामान्य बनाइराख्नका लागि प्रत्येक दिन सागसब्जी खाने गर्नुहोस् ।२. डा’र्क च’क्लेटः डा’र्क च’क्लेटले मु’टुको रो’गी र कम ब्ल’ड प्रे’सर भएका बि’रामीहरुका लागि राम्रो मानिन्छ ।